4th day on Splinterlands and Complete Daily Quest, Win ALCHEMY POTION. - Splintertalk
4th day on Splinterlands and Complete Daily Quest, Win ALCHEMY POTION.
Hello everyone. I wish you allavery happy day. Today marks the fourth day of the Splinterlands game. There seems to bealittle bit of understanding of the game, but very little.
I have decided to complete the Daily Quest from Splinterlands Game every day. Today, the Daily Quest is the Death Quest. With Death Quest you have to win5matches and if you win you will be able to open Daily Reward Box.
A total of 21 games were played for Daily Quest. I won the first match and lost the second match, then won3matches inarow and won4matches in6matches for Death Quest. It was very difficult to win the 5th match. A total of 15 matches were played to win the remaining one match.
When all Death Quest5wins, open the Daily Rewards Box and try my luck. I think I'm lucky. Received ALCHEMY POTION CHARGES.
The box I received for Daily Quest, which was completed the day before, could not be opened. @myothuzar was leaveacomment and teach me how to open it. And I got 1 ALCHEMY POTION.
Therefore, Rewards for Daily Queat2days are2bottles of ALCHEMY POTION CHARGES. I still have to learn how to use it.
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တစ်နေ့တာ အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ Splinterlands Game ကို ကစားတာ ၄ ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ Game အကြောင်းကို အနည်းငယ် သဘောပေါက်သလိုရှိသော်လည်းအနည်းအကျဥ်းသာဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်သည် Splinterlands Game မှ Daily Quest များကို နေ့စဥ်ပြီးမြောက်အောင် ကစားမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ ဒီနေ့အတွက် Daily Quest မှာ Death Quest ပင်ဖြစ်ပါသည်။ Death Quest ဖြင့် ၅ပွဲ အနိုင်ရရှိရန်လိုအပ်ပြီး အနိုင်ရရှိပါက Daily Reward Box ကို ဖွင့်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Daily Quest အတွက် စုစုပေါင်း ၂၁ ပွဲ ဆော့ခဲ့ရပါသည်။ ပထမဆုံးပွဲ အနိုင်ရပြီး ဒုတိယပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ၃ပွဲဆက် အနိုင်ရရှိပြီး Death Quest အတွက် ၆ပွဲကစား ၄ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၅ပွဲမြောက်အနိုင်အား ရရှိရန် အတော်ခက်ခက်ခဲခဲ ကစားခဲ့ရပါသည်။ လက်ကျန်တစ်ပွဲ အနိုင်ရရန် စုစုပေါင်း ၁၅ ပွဲ ကစားခဲ့ပြီးမှ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
Death Quest5ပွဲလုံးအောင်မြင်သောအခါ Daily Rewards Box ကိုဖွင့်၍ ကံစမ်းခဲ့ပါသည်။ ကံကောင်းသည်ထင်ပါသည်။ ALCHEMY POTION CHARGES ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။
ယခင်နေ့က ပြီးစီးခဲ့သော Daily Quest အတွက် ရရှိသော BOX မှာ ဖွင့်မရဖြစ်ခဲ့ပါသည်။အမ@myothuzar ၏ သင်ပြမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြည့်ရာ ALCHEMY POTION ပင် ရရှိခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် Daily Queat ၂ ရက်စာ အတွက် Rewards မှာ ALCHEMY POTION CHARGES ပုလင်း ၂ လုံးပင်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို လေ့လာရပေဦးမည်။
hive-131619 splinterlands spt oneup gaming myanmar proofofbrain trafficinsider hivelist
Good to see you in the splinterlands game, !PIZZA.
Thank you for your warmly and I appreciate it. !PIZZA !LOLZ
sheikhzaman tipped callmemaungthan (x1)
callmemaungthan tipped nayhlaingsoe (x1)
nayhlaingsoe tipped callmemaungthan (x1)
myanmarkoko tipped callmemaungthan (x1)
callmemaungthan tipped sheikhzaman (x1)
@myothuzar(7/10) tipped @callmemaungthan (x1)
callmemaungthan tipped myanmarkoko (x1)
ကျနော်ကဘယ်လိုများသင်ပေးလိုက်တာလဲ။ ပြောပြပါအုံး။ ဂုဏ်ယူရအောင်မို့။
Daily reward box ဖွင့်မရတာ 😁အမပြောသလိုလုပ်ကြည့်တော့ ရသွားပါပြီ 😁
ကျွန်နော်က ဆေးပုလင်းတွေနေ့တိုင်းရနေရင်ကို ပျော်နေတက်တာ
ပုလင်းတွေရဲ့သဘောတရားက ပုလင်းတွေများလာရင် ကဒ်တွေရလာလိမ့်မယ်။
ကျွန်နော်ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို သိသလောက်ပြောပြတာပါ😁
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ အခုလောဆယ်က သိပ်မသိနေသေးလို့ လေ့လာနေဆဲပါ !PIZZA
Splinterlands ဆော့နေပြီလား။ ဖိုက်တင်းဗျာ။
အခုမှ စတင်စမ်းသပ် ပြီး ဆော့ကြည့်တာပါဗျ !PIZZA
ပုံမှန်လေးခရီးဆက် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဆင်ပြေလာမှာပါ အကို
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားသင်ယူနေဆဲပါအကို !PIZZA
အတော်လေး ဟုတ်လာပြီပဲ ကောင်းပါတယ် ကြိုးစားထားပါ...!PIZZA !LOLZ
အဆင်ပြေသွားလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။မသိတာရှိရင် မေးပါ ကူညီပါ့မယ်။